Ireo Nosy Canary Espaniola dia miady mafy amin'ny fipoahan'ny volkano manakaiky
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Espaniola » Ireo Nosy Canary Espaniola dia miady mafy amin'ny fipoahan'ny volkano manakaiky
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
"Tsy afaka manao vinavinan'ny fotoana fohy isika, fa ny zava-drehetra dia manondro fa hivoatra ho horohoron-tany lehibe indrindra izay hihamafy sy hahatsapan'ny mponina izany," hoy ny talen'ny IGN ao amin'ny Nosy Canary, María José Blanco, hoy izy.
Horohoron-tany nisy horohoron-tany 4,222 hita teo akaikin'ny volkano Tenegula ao amin'ny nosy La Palma.
Ny tompon'andraikitra amin'ny Nosy Canary dia namoaka fampandrenesana mavo - ny faharoa amin'ny rafitra efa-dahy.
Ny National Geographic Institute any Espana dia nampitandrina fa hisy horohoron-tany mahery vaika amin'ny andro ho avy.
Ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny ao amin'ny Nosy Canary Espaniola dia namoaka fampitandremana momba ny fipoahan'ny volkano manakaiky, taorian'ny nahitan'ny National Geographic Institute (IGN) Espaniola ny «horohoron-tany» nisy horohoron-tany miisa 4,222 XNUMX teo akaikin'ny volkano Teneguía ao amin'ny nosy La Palma.
Volkano Teneguía ao amin'ny nosy La Palma.
The Canary Islands namoaka fampitandremana mavo ny tompon'andraikitra tamin'ny talata - ny faharoa amin'ny rafitra ambaratonga efatra, fampitandremana ny amin'ny horohorontany mety hitranga.
Androany, nohavaozina ny fanombanana mba hilazana fa, na dia tsy mino aza ireo tompon'andraikitra fa hisy fipoahana eo noho eo dia mety hiova haingana izany.
IGN dia nampitandrina koa fa “hisy horohoron-tany mahery vaika” amin'ny andro ho avy.
"Tsy afaka manao vinavinan'ny fotoana fohy isika, fa ny zava-drehetra dia manondro fa hivoatra ho horohoron-tany lehibe indrindra izay hihamafy sy ho tsapan'ny mponina," hoy ny talen'ny IGN tany amin'ny Nosy Canary, hoy i María José Blanco.
Hatramin'ny alakamisy dia 11 metatra toradroa (388 tapitrisa metatra toratelo) ny magma no "nampidirina" tao afovoan'ilay Valan-javaboary Cumbre Vieja akaikin'ny volkano Teneguía, hoy ny Canary Islands Volcanology Institute, ka nahatonga ny fiakaran'ny tany 6cm (2in) eo amin'ny tampony.
Nipoaka farany ny volkano tamin'ny 1971, niteraka fahasimbana tamin'ny fananana sy ny moron-dranomasina teo akaiky teo, ary nahafaty mpanjono iray, na dia betsaka aza ny faritra be mponina sy ny toerana fizahan-tany manodidina azy. Taorinan'ny fipoahana teo aloha, nilamina ny asan'ny seismika, nitohy tamin'ny 2017, tato ho ato izay nahitana fiakaran'ny horohorontany.
Ny faritra hafa ao amin'ny Canary Islands dia tranon'ny volkano mavitrika koa, ao anatin'izany ny Tenerife's Teide, izay mbola tsy nipoaka nanomboka ny taona 1909, ary ny Timanfaya an'i Lanzarote, izay nitsoka farany tamin'ny taonjato faha-19.